ချင်းတွင်းမြစ် အထက်ပိုင်းတွင် ရွှေနှင့် ပယင်းတူးဖော်မှုများကြောင့် သဘာဝတောများ ပြုန်းတီးလာ? - Yangon Media Group
ဖောင်းပြင်၊ ဇန်နဝါရီ ၂
ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းတွင် မြေအောက်သယံဇာတများရှာဖွေတူးဖော်မှုများကြောင့် သဘာဝတောတောင်များပျက်စီးလာကာ ယခုနှစ်ပွင့်လင်းရာသီ ဝါးဖောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအသုံးပြုသည့် ဝါးကုန်ကြမ်းရရှိမှု နည်းပါးလာနေကြောင်း ဖောင်းပြင်မြို့နယ် တံငါရွာမှငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဦးစံဖေက ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။
”ကျွန်တော်တို့ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်း ဝါးထွက်ဒေသတွေမှာ ရွှေ၊ ကျောက်၊ ပယင်းရှာဖွေ တူးဖော်မှုတွေများလာတဲ့အတွက် သဘာဝသစ်တော၊ ဝါးတောတွေ ပျက်စီးပျောက်ကွယ်လာပြီး၊ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သစ်၊ ဝါးထွက်ရှိမှုနည်းပါးလာ တယ်။ နှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဖောင်းပြင်မြို့ နယ်က သစ်ဖောင်၊ ဝါးဖောင်၊ ကြိမ်ဖောင် တွေစုန်ဆင်းမှုများပါတယ်။ အခုနှစ်တော့ သစ်၊ဝါး၊ ကြိမ်တောတွေလည်းနည်းပါးလာတော့ လုပ်ကိုင်ထုတ်လုပ်သူလည်း နည်းလာတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်း ဟုမ္မလင်း၊ ခန္တီးမြို့နယ်များမှထွက်ရှိသော မဲတင်းခါးဝါးမှာ မုံရွာဈေးကွက်တွင် နာမည်ကျော် ဖြစ်ပြီး၊ ယခုအခါယင်းဒေသများတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဝါးတောများစိုက်ပျိုးထားပြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၌ ရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ် မှုနှင့် ကျောက်၊ ပယင်း ထုတ်လုပ်မှုတို့ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များမှ စိစစ်မှုများ ကြောင့် သစ်တောများအတွင်းဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးလာသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်ဟာ ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၄၃၂၆ မိုင် ကျယ်ဝန်းတယ်။ ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်းနှစ်မြို့နယ်ပါဝင်တဲ့ ထမံသီဘေးမဲ့တောအကျယ်အဝန်းက ၈၃ဝ ဒသမ ၄ဝ စတုရန်းမိုင် ကျယ်တဲ့တောကြီးကိုထူထောင်ထားတဲ့အပြင် ဒေသအလိုက်သစ်ကြီးဝါးကြီး တောတွေကိုလည်း သစ်တောဥပဒေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေပါတယ်”ဟု ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်သစ်တောဌာနမှ တာဝန်ရှိတစ်ဦးကပြောသည်။ ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းတွင် ဝါးမျိုးစုံထွက်ရှိရာ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားဒေသတွင် မဲတင်းခါးဝါး၊ ဝါးပိုးဝါး၊ ဖောင်းပြင်နယ်တွင် မြင်ဝါး၊ တင်းဝါး၊ မော်လိုက်နယ်ယူးချောင်းနှင့်ကိုးတန်ချောင်းတို့တွင် တင်းဝါး၊ ကလေးဝမြို့နယ်နှင့် မြစ်သာမြစ်ရိုးတစ် လျှောက်တွင် မြင်ဝါး၊ တင်းဝါးတို့ထွက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်၌ အစိုးရမှ မြေဧက ၁၇ဝဝဝ ခန့် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးရန် စိ?
Honey Boy ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်မည့် မေကာမွန်ရိုး
လူငယ်အနုပညာရှင်များနှင့် မျိုးဆက်ဟောင်းအနုပညာရှင်များ ပူးပေါင်းဖန်တီးကြပါက မြန်မာ့ရုပ်ရ